DMC-GH4GC Mirrorless DSLM Camera - Panasonic
LUMIX ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ် ကင်မရာ DMC-GH4GC
အထင်ကြီးစေမည့် ဓာတ်ပုံများ၊ လက်ဖျားခါသွားစေမည့် 4K ဗီဒီယိုများ
တစ်ဖက်တွင် ရုပ်ထွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အရောင်ထပ်ဆင့်ထုတ်လွှတ်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးကာ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း GH4 ၏ Live MOS Sensor နှင့် Venus Engine တို့သည် အစက်အပြောက်များကို လျှော့ချရန် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော DFD နည်းပညာသည် Contrast AF ၏ မြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ 4K ဗီဒီယိုများကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးရန် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး DSLM ကင်မရာအဖြစ် ၎င်းသည် ပညာရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို အမှန်အကန် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
*ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ် (DSLM) ကင်မရာ အတွက်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်စွဲပါအတိုင်း
သဘာဝကျကျ စစ်မှန်သော အရောင်အသွေးများအတွက် အကောင်းဆုံသော ရုပ်ပုံအရည်အသွေး
မြန်နှုန်းမြင့် အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးသော quad-core CPU အသစ်ဖြင့် image processor Venus Engine ကို အသစ် တီထွင်ဖန်တီးထားပါသည်။ Digital Live MOS Sensor အသစ်နှင့် Venus Engine တို့ကို တဖြည်းဖြည်းပေါင်းစပ်ထားမှုသည် ထိတွေ့မှုအာရုံခံနိုင်စွမ်း (အများဆုံး ISO25600)၊ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် အရောင်ထပ်ဆင့်ထုတ်လွှတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ပို၍ အရည်အသွေးကောင်းသော ပုံကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်း၏ ရုပ်ပုံဖော်ပြချက်သည် သဘာဝကျကျ ဆက်ရှိနေပါသေးသည် - ၎င်းသည် LUMIX ရည်ရွယ်ထားသည့် အဓိက ဆန္ဒပင် ဖြစ်ပါသည်။
ပရိုအရည်အသွေးနှင့် ကိုက်ညီစေမည့် ဗီဒီယို ဖန်တီးမှု
MOV/MP4 တွင် 4K (ရုပ်ရှင်ရုံ 4K- 4096x2160 / 24 fps နှင့် QFHD 4K:3840x2160 / 30 fps အထိ) ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် ရုပ်သံဖမ်းယူမှု ကြာချိန်ကို ကန့်သတ်မထားဘဲ 200 Mbps (ALL-Intra) သို့မဟုတ် 100 Mbps (IPB) တွင် အထူးနှုန်းမြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အသွေးနှင့် စံနှုန်းများ ရရှိရန် DMC-GH4 အသစ် ထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ *1 *2 ထို့အပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုအတွက် လိုအပ်သော လက်တွေ့ကျသည့် လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးစုံကိုလည်း အသစ်ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
*1 ရိုက်ကူးမည့် ဖော်မတ်နှင့် ကင်မရာကို ရောင်းချသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်ပြီး လှုပ်ရှားပုံရိပ်များကို ၂၉ မိနစ်၊ ၅၉ စက္ကန့်အထိ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
*2 100 Mbps သို့မဟုတ် အထက်ဖြင့် နှုန်းမြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူး mode ကို အသုံးပြုသည့်အခါ UHS Speed Class3(U3) ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော SDXC/SDHC Memory Card ကိုသုံးပါ။
အကောင်းဆုံး ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် တုန့်ပြန်မှု
အကောင်းဆုံး ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်စနစ်နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် တုန့်ပြန်စနစ်သည် DMC-GH4 တွင် ပါရှိပါသည်။ ဤတိကျမှု မြင့်မားသော Contrast AF ကို ခန့်မှန်း ၀.၀၇ စက္ကန့်အထိ** အထူး AF မြန်နှုန်းကို ရရှိရန် DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးပေးနိုင်သည့် စွမ်းအားကို 12 fps(AFS) အထိ မြှင့်တင်ထားပါသည်။
2,359K-dot LVF (Live View Finder) နှင့် 1,036K-dot နောက်ကင်မရာတို့သည် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း အချိန်ကိုလျှော့ချရန် OLED ကို အသုံးချထားပါသည်။
*AFS ထဲတွင် H-FS14140 (သို့) H-HS12035 နှင့်အတူ
အလွန်လေးလံသည့် ဒဏ်ကို ခံနိုင်စေရန်အတွက် DMC-GH4 ကို အရှေ့နှင့်အနောက်ဘောင်တွင် မဂ္ဂနီဆီယမ် သတ္တုစပ်အပြည့်ဖြင့် အဓိက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၊ ဒိုင်ခွက်နှင့် ခလုတ်တိုင်းတွင် ရေနှင့် ဖုန်မဝင်စေရန် အလုံပိတ် တည်ဆောက်ထားသည်။ ခန့်မှန်းခြေ 200,000 ဆ ကြာရှည်ခံနိုင်ရန် shutterခလုတ်ကိုလည်း ဒီဇိုင်းပြန်လည် ပြုလုပ်ထားသည်။
*Panasonic in-house စစ်ဆေးမှု။
ပို၍ ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်စေရန် DMC-GH4 ကို NFC နည်းပညာ သို့မဟုတ် in-camera RAW တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသော Wi-Fi® ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် External Flash (DMW-FL580L)၊ Stereo/ShotgunMicrophone (DMW-MS2) သို့မဟုတ် Battery Grip (DMW-BGGH3) တို့ကိုနှင့် လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ DMC-GH4 ၏ တိုးချဲ့ထားသော ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းက သမာရိုးကျ ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ် ကင်မရာ၏ ကန်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
16.05MP Digital LiveMOS Sensor အသစ်
16.05-megapixel Digital Live MOS Sensor အသစ်တွင် အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ထွက်နှင့် အမြန်တုန့်ပြန်စနစ်ဖြင့် အာရုံခံမြင့်မားသော ရုပ်ပုံရိုက်ကူးပေးသည့်စနစ် နှစ်ခုစလုံး ပါရှိပါသည်။ အီလက်ထရောနစ် Shutter ကို အသုံးပြုသည့်အခါ (သို့) ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးသည့်အခါ ခန့်မှန်းခြေ ၅၀% ခန့်ပိုမြန်သော နှုန်းဖြင့် ဒေတာပေးပို့သည့်စနစ်သည် တဖြေးဖြေးလှုပ်ရှားသည့် Shutter အထူးပြုလုပ်ချက်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ LiveMOS Sensor ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝ အသုံးချပြီး ရွေ့လျားနှုန်းအတိုင်းအတာကို အားနည်းသော ISO အဆုံးတစ်ဖက်တွင် အများဆုံး ၂၅% တိုးချဲ့ထားပါသည်။ ထို့အပြင် အထူးအစက်အပြောက်လျှော့ချသည့်စနစ်ကလည်း အများဆုံး မိနစ် ၆၀ ကြာ အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
အဆင့်မြင့် Image ProcessorVenus Engine
4K ကဲ့သို့ ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကို ရိုက်ကူးရန် လိုအပ်သော မြန်နှုန်းမြင့် အချက်ပြလုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိစေသည့် quad-core CPU ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ကာ image processor Venus Engine ကို အသစ်တီထွင်ဖန်တီးထားပါသည်။ အထူးအစက်အပြောက် လျှော့ချသည့်စနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး DMC-GH4 သည် အများဆုံး ISO25600 တွင် ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပုံအရည်အသွေးကို ရရှိရန် အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် အရောင်ထပ်ဆင့်ထုတ်လွှတ်မှုတို့ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Focus Peaking လုပ်ဆောင်ချက်သည် MF နှင့် AF+MF mode တွင် ဖိုးကပ်စ်၏ အထွတ်အထိပ်ကိုပြသပါသည်။ အရာဝတ္ထုကို တိုက်ရိုက်မြင်နေရသော မြင်ကွင်းထဲတွင် စောင့်ကြည့်နေစဉ် ဖိုးကပ်စ်၏ ထိပ်ဆုံးမှတ်ကို အသုံးပြုသူများက မြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် Wi-Fi® မှတဆင့် စမတ်ဖုန်း/တက်ဘလက်ဖြင့် အဝေးမှထိန်းချုပ်ကာ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်စေနိုင်ပါသည်။
ထင်ရှားအောင်ပြသမှုနှင့် အရိပ်တို့ကို ရှေ့/နောက် ဒိုင်ခွက်သုံးပြီး သီးခြား ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံ ၃ ခုအပြင် ဆက်တင် ပုံစံ ၃ ခုကိုလည်း စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသေးသည်။
ကင်မရာထဲတွင် RAW ဒေတာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှု
DMC-GH4 သည် ကင်မရာထဲတွင် RAW ပုံများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ color space setting် (sRGB / AdobeRGB) အပြင်၊ LUMIX ၏ Photo Style? Intelligent D-range Control, IntelligentResolution တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး white balance (အဖြူရောင်မျှခြေ)၊ exposure compensation (အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှု)၊ contrast (အလင်းအမှောင်ပြတ်သားမှု)၊ highlight (ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်မှု) / shadow (အရိပ်)၊ saturation (ပြည့်ဝမှု)၊ noise reduction (အစက်အပျောက်လျှော့ချခြင်း)၊ sharpness (ထင်ရှားပြတ်သားခြင်း) သို့မဟုတ် hue (အရောင်အသွေး) တို့ကိုလည်း အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံ / ဗီဒီယိုအတွက် အရောင် / အရောင်အသွေးအမျိုးအစားကို Standard / Vivid / Natural /Monochrome / Scenery / Portrait ထဲမှ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ mode တစ်ခုချင်းစီအတွက် contrast (အလင်းအမှောင်ပြတ်သားမှု)၊ saturation (ပြည့်ဝမှု)၊ noise reduction (အစက်အပျောက်လျှော့ချခြင်း)၊ sharpness (ထင်ရှားပြတ်သားခြင်း) သို့မဟုတ် hue (အရောင်အသွေး) သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ကို ကင်မရာထဲတွင် ချိန်ညှိပြီးမှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။
အီလက်ထရောနစ် စနစ်သုံး shutter နှင့် Silent Mode
DMC-GH4 တွင် လက်တွေ့ရိုက်ကူးနိုင်သော အီလက်ထရောနစ် ရှတ္တာခလုတ်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။ Live MOS Sensor ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော မြန်နှုန်းမြင့် အချက်ပြ ပေးပို့စနစ်သည် rolling shutter ပြုလုပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ အထူးရိုက်ကူးရေးပွဲများအတွက် တစ်ခုတည်းသော ဆက်တင်သတ်မှတ်မှုဖြင့် AF အကူအညီ မီးတိုင်နှင့် ဖလက်ရ်ှမီး မလိုဘဲ ဤ Silent mode သည် ရှတ္တာခလုတ်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာသို့ပြောင်းလဲပေးပြီး အသံ (AF၊ ရိုက်ကူးလုပ်ဆောင်ချက်) အားလုံးကို ပိတ်ပေးပါသည်။
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး*1 4K Video Recording
GH4 ၏ အထင်ရှားဆုံးသော အင်္ဂါရပ်များအနက် တစ်ခုမှာ ကန့်သတ်မထားသော*24K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးစနစ်ပင် ဖြစ်ပါသည် (ရုပ်ရှင်ရုံ 4K- 4096x2160 / 24 fps နှင့် QFHD 4K- 3840x2160 / 30 fps အထိ) MOV/MP4*3
*1 ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်ပါအတိုင်း DSLM အတွက်။
*2 ရိုက်ကူးမည့် ဖော်မတ်နှင့် ကင်မရာကို ရောင်းချသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်ပြီး လှုပ်ရှားပုံရိပ်များကို ၂၉ မိနစ်၊ ၅၉ စက္ကန့်အထိ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
*3 100 Mbps သို့မဟုတ် အထက်ဖြင့် နှုန်းမြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူး mode ကို အသုံးပြုသည့်အခါ UHS Speed Class3(U3) ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော SDXC/SDHC Memory Card ကိုသုံးပါ။
အရည်အသွေးများစွာပါဝင်သော ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး ပုံစံသတ်မှတ်ချက်များ
DMC-GH4 သည် ရိုက်ကူးမှုကြာချိန် ကန့်သတ်ချက် *1 *2 မရှိသည့် 200 Mbps (ALL-Intra) သို့မဟုတ် 100 Mbps (IPB) အထူးနှုန်းဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည် သုံးစွဲမှုပမာဏအလိုက် ဖရိန်နှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် MOV, MP4, AVCHD Progressive နှင့် AVCHD တို့ထဲမှ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ MP4 / MOV တွင်၊ LPCM (LinearPulse Code Modulation) ရှိ အရည်အသွေးကောင်းသော အသံကို ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။
*2 100 Mbps ထက်ကျော်သော နှုန်းမြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူး mode ကို အသုံးပြုသည့်အခါ UHS Speed Class3(U3) ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော SDXC/SDHC Memory Card ကိုသုံးပါ။
ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး ဖော်မတ်များ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသုံးပြုသူများ၏ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက်၊ စနစ်ကြိမ်နှုန်းကို 59.94Hz (23.98Hz) / 50.00Hz / 24.00Hz ထဲမှ လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
HDMI မှတဆင့် အချိန်နှင့်တပြေညီ ထုတ်ပေးမှု
DMC-GH4 သည် anoptional micro HDMI ကြိုးမှတဆင့် ပြင်ပမော်နီတာဆီသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတ်ပုံထွက်ရှိအောင် (4:2:2 / 8 bit သို့မဟုတ် 4:2:2 / 10 bit) ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ပုံများကို အရေးတကြီးကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဗီဒီယို ဖန်တီးခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ပြသမှုပေါ်မူတည်ပြီး ရိုက်ကူးထားသည့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဆက်တင် မီနူးများပါသော အကြောင်းအရာကိုသာလျှင် သီးခြားစီ ထုတ်ပေးရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
4:2:2/10-bit ထုတ်ပေးမှုကို အသုံးပြုသော အခါ၊ ကင်မရာထဲရှိ SDXC/SDHC Memory Card တွင် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို တပြိုင်နက်တည်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
4:2:2 / 8-bit ထုတ်ပေးမှုကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ဗီဒီယိုကို ကင်မရာထဲရှိ 4:2:0 / 8-bit SDXC/SDHC Memory Card ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
VFR (Variable Frame Rate) သည် အားလုံးကို Full-HD ဖြင့် 96 fps / 4x* စသည့် အနှေး/အမြန် ရွေ့လျားမှုဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အထူးပြုလုပ်ချက် ရွေးချယ်စရာများကို သိရှိရန် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်ပါ။
*24p playback ထဲတွင်။
Time Lapse Shot နှင့် Stop Motion Animation တို့သည် အစီအစဉ်တကျရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများဖြင့် လှုပ်ရှားမှုရပ်ထားသော (ဖရိန်ရပ်) ဗီဒီယိုကို ထုတ်ပေးရန် သို့မဟုတ် အရာဝတ္တုများကို မရွေ့မလျား စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ နှစ်မျိုးစလုံးကို ကင်မရာထဲတွင် ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် မရိုက်ကူးမီနှင့် ရိုက်ကူးနေစဉ် အလင်းနှင့်ထိတွေ့လွန်းသော နေရာကို ဖော်ပြပေးပြီး ပုံစံကို ပြင်ပမော်နီတာသို့လည်း ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် အမည်းရောင်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အလင်းတောက်ပမှုမျှခြေ ±15 အဆင့်များကို ချိန်ညှိခွင့်ပြုပါသည်။
“CINELIKE D” နှင့် “CINELIKE V” တို့ကို ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုကဲ့သို့သော ကြည်လင်ပြတ်သားသော အသံကို ရရှိရန် အသစ်ဖန်တီးထားပါသည်။
၎င်းသည် TV / PC monitor တွင်ပေါ်နေသော အလင်းတန်းများ သို့မဟုတ် အလွန်တောက်ပသော အလင်းများကို လျှော့ချခြင်းအတွက် လက်တွေ့အသုံးကျပါသည်။
၎င်းကို မြင်ကွင်းရှုထောင့်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ပြသခြင်းအားဖြင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အညွှန်းအမှတ်အသားအဖြစ် ဗဟိုအညွှန်းပြကိရိယာက အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Color Bars (SMPTE / EBU / ARIBStandard) သည် အရောင် သို့မဟုတ် အလင်းတောက်ပမှုကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ 1KHz Test Tone သည် အသံအတိုးအကျယ်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
RecRun သို့မဟုတ် Free Run count-up နည်းလမ်းများထဲရှိ SMPTE-compliant Time Code ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုနောက်ပိုင်းတွင် ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဖြစ်စေ၊ အသံရင်းမြစ်ကိုဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ဆင့်ခ်လုပ်နိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဗီဒီယို လုပ်ဆောင်ချက်များ
DFD နည်းပညာသုံး Contrast AF
ဖိုးကပ်စ်ချိန်သည့် အချိန်ကို တိုတောင်းစေပြီး DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာဖြင့် Contrast AF စနစ်ကို အဆင့်မြင့်အောင် ဖန်တီးဆန်းသစ်ထားပါသည်။ လက်ရှိ မှန်ဘီလူး၏ မြင်နိုင်စွမ်းဒေတာနှင့် သင့်တင့်အောင်ပြုလုပ်ပြီး မတူညီသည့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အဆင့်ဖြင့် ပုံ ၂ ပုံကို တန်ဖိုးဖြတ်ကာ အရာဝတ္ထု၏ အကွာအဝေးကို ၎င်းက တွက်ချက်ပါသည်။ ရလဒ်အဖြစ် ခန့်မှန်းခြေ ၀.၀၇ စက္ကန့်*ဖြင့် အထူးမြန်နှုန်းမြင့် AF ကို ရရှိပါသည်။ ထိုတိုးတက်မှုသည် ဆုံချက်အလျားတိုးမြှင့်လာသည်နှင့်အမျှ ပို၍လည်း အကျိုးရှိလာပါသည်။
ဖိုးကပ်စ်ချိန်ထားသည့် အမြန်ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးရန် ခန့်မှန်း 40 (RAW ပါဝင်သည်) / ခန့်မှန်းခြေ 100 (RAW မပါဝင်ပါ) နှင့်7fps (AFC) အထိ အများဆုံး ဖမ်းယူနိုင်သော ပုံများဖြင့် 12 fps(AFS) တွင် မြန်နှုန်းမြင့် ဆက်တိုက်ရိုက်ချက်များကို DMC-GH4 က မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်သည်။ အမြန်စတင်ရိုက်ကူးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အချိန်တိုအတွင်း ရိုက်ကူးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် DMC-GH4 သည် ထိုအခိုက်အတန့်မျှ ဖြစ်ပွားသော အခြေအနေကို ရိုက်ကူးခွင့်ရရှိလိုက်အောင် သေချာ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
ဆုံချက်အမှတ်ကို ပို၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စေရန်အတွက် 23 (DMC-GH3) မှ 49 အမှတ်များသို့ တိုးမြှင့်ထားပါသည်။
49 ဖိုးကပ်စ်ချိန်နိုင်သည့် ဧရိယာထဲမှ ဆုံချက်ချိန်မည့် အကွက်များကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်သည့် Custom Multi mode
သမာရိုးကျ Face Recognition AF အပြင်၊ DMC-GH4 တွင် မျက်နှာပေါ်ရှိ မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်နှာပေါ်တွင် အလိုလျောက် ဖိုးကပ်စ်ချိန်ပေးနိုင်သော Face / Eye Detection AF စနစ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်။
1-Area Focus Point ကို ချောမောပြေပြစ်စွာ ပုံအကြီးချဲ့ခြင်း
ယခု ထို 1-area AF ဧရိယာသည် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရသော ဖိုးကပ်စ်တွင်သာမက အော်တို ဖိုးကပ်စ်တွင်ပါ အခက်အခဲမရှိ ပုံကြီးချဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။
Dual OLED Displays -LVF & Monitor
DMC-GH4 သည် ခန့်မှန်း 1.34x / 0.67x* ရှိသော 2,359K-dot LVF (Live View Finder) နှင့် 3.0-inch 1,036K-dot ထောင့်လွတ် အနောက်မော်နီတာ အတွက် အသစ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော တိကျမှုမြင့်မားသည့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် OLED (Organic Light-Emitting Diode) ပြသမှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး အချိန်တိုအတွင်း မြန်နှုန်းမြင့် တုံ့ပြန်ချက်ကို ရရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် LVF အတွက် OLED သည် အကောင်းဆုံးသော အရောင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် 10,000:1 မြင့်မားသော အလင်းအမှောင်ပြတ်သားမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
* ၃၅ မီလီမီတာ ကင်မရာနှင့် ညီမျှသည်
မဂ္ဂနီဆီယမ် သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့် အကြမ်းခံဒီဇိုင်း
အလွန်လေးလံသည့် ဒဏ်ကို ခံနိုင်စေရန်အတွက် DMC-GH4 ကို အရှေ့နှင့်အနောက်ဘောင်တွင် မဂ္ဂနီဆီယမ် သတ္တုစပ်အပြည့်ဖြင့် အဓိက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၊ ဒိုင်ခွက်နှင့် ခလုတ်တိုင်းတွင် ရေနှင့် ဖုန်မဝင်စေရန် အလုံပိတ် တည်ဆောက်ထားသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Shutter ခလုတ်
ခန့်မှန်းခြေ 200,000 ဆ ကြာရှည်ခံနိုင်ရန် Shutter ခလုတ်ကိုလည်း ဒီဇိုင်းပြန်လည် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အမြန်ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္တု၏ လျှပ်တပြက်အနေအထားကို ရိုက်ကူးရန် သာမက အားကျနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော defocus ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ပြင်ပရိုက်ကူးရေးများတွင်ပင် ဖွင့်ထားသော အပါချာနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်း အများဆုံး 1/8000 ၌ အမြင့်ဆုံးသော Shutterမြန်နှုန်းကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ built-in / ပြင်ပ ဖလက်ရ်ှမီးတို့ကို အများဆုံး 1/250 စက္ကန့် Shutter မြန်နှုန်းဖြင့် ဆင့်ခ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်အစိတ်အပိုင်းများအား အကောင်းဆုံး ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပုံစံ
လျှင်မြန်သော၊ အလိုလို ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်သော ဒိုင်ခွက် ၃ ခုကို ကင်မရာ၏ ထိပ်နှင့် အနောက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အဓိကဒိုင်ခွက်ကို လော့ခ် ချသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ မြှုပ်ထားသော ခလုတ်ဖြင့် exposure compensation (အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှု)၊ white balance (အဖြူရောင်မျှခြေ ချိန်ညှိမှု) သို့မဟုတ် ISO ဆက်တင်များကို တိုက်ရိုက်ဝင်သုံးနိုင်ပြီး အများဆုံး ဆက်တင် ၅ ခုကို Fn ခလုတ်အတွက်ခွဲဝေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ မြင်ကွင်းရှာဖွေကိရိယာမှ အကြည့်လွှဲစရာမလိုဘဲ ဤပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
တိုးချဲ့ထားသော ချိတ်ဆက်မှုအတွက် terminal များ
DMC-GH4 တွင် ချိတ်ဆက်မှု terminal များစွာ ပါရှိပါသည်။ 3.5mm မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် 3.5mm နားကြပ်ပေါက်များ ၎င်းသည် ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ရွေးချယ်နိုင်သော HDMImicro ကြိုးမှတဆင့် ပြင်ပမော်နီတာပေါ်သို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သော ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် remote controller အတွက် AV output များ၊ ဖလက်ရ်ှမီး sync terminal နှင့် 2.5mm အပေါက်တို့ ပါရှိပါသည်။ ၎င်းသည် SDXC / SDHC Memory Card UHS SpeedClass3(U3) နှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
NFCT နည်းပညာသုံးထားသော Wi-Fi®
DMC-GH4 သည် NFC (Near Field Communication) နည်းပညာနှင့် Wi-Fi® ချိတ်ဆက်မှု (IEEE802.11 b/g/n) ကိုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပါသည်။ "Panasonic Image App" နှင့် ဓာတ်ပုံ/ ဗီဒီယိုကို အဝေးမှရိုက်ကူးခြင်းကိုလည်း စမတ်ဖုန်း/တက်ဘလက်သုံး၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ရိုက်ကူးပြီးနောက်တွင်လည်း ဓာတ်ပုံထဲတွင် နေရာအညွှန်းကို အလွယ်တကူ ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ NFC မပါသော စမတ်ဖုန်း/တက်ဘလက်တို့အတွက် ကင်မရာသည် ကုဒ်ကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုအလွယ်တကူ ပြီးမြောက်စေရန် ၎င်း၏ မော်နီတာပေါ်တွင်မြှုပ်ထားသော QR ကုဒ်ကိုပြသပါသည်။
Interface Unit အသစ် (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
ဗီဒီယိုများကို စွမ်းအားအပြည့်ဖြင့် ထုတ်လွှတ်ရာ၌ ပညာရှင်များအား ကူညီပေးရန် Interface Unit (AG-YAGHG) ကို အထူး ဖန်တီးထားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အချိန် ကုဒ်*ပါသော Full HD (4:2:2 / 10 bit) four parallel output သို့မဟုတ် 4K (4:2:2 / 10bit) ထွက်ရှိမှု နှစ်ခုစလုံးတို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေဆောင်ရွက်ပါသည်။ 2ch XLR input terminal များကိုလည်း လိုင်း သို့မဟုတ် condenser မိုက်ခရိုဖုန်းအတွက် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်း၏ အသံအတိုးအကျယ်ကို L / R သီခြားစီဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် 12V DC IN နှင့်လိုက်လျောညီထွေဆောင်ရွက်ပါသည်။
*4:2:2/10-bit output ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ကင်မရာထဲရှိ SDXC/SDHC Memory Card ထဲတွင် တပြိုင်နက်တည်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
AG-YAGHG ၏ အသေးစိတ်အချက်များကို Professional AV Global Site (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ) တွင်ကြည့်ရှုပါ။
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 10.0-30.0 cm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S. | F4.1, 1/250 sec, ISO 640
LUMIX GH4 အထူးပုံပြခန်း- http://panasonic.net/avc/lumix/dslm/gh4_special/ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 10.0-30.0 cm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S. | F5.6, 1/320 sec, ISO 500
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 0.7-1.4 cm / F4.0 ASPH. | F4.0, 1/320 sec, ISO 500
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 10.0-30.0 cm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S. | F5.6, 1/1250 sec, ISO 1000
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G 2.0 cm / F1.7 II ASPH. | F4.5, 1/4000 sec, ISO 400
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G X VARIO 1.2-3.5 cm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. | F6.3, 1/1000 sec, ISO 800
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G X VARIO 1.2-3.5 cm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. | F10, 1/1000 sec, ISO 400
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G X VARIO 3.5-10.0 cm / F2.8 / POWER O.I.S. | F6.3, 40 sec, ISO 800
LUMIX GH4 အထူးပုံပြခန်း- http://panasonic.net/avc/lumix/dslm/gh4_special/ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 10.0-30.0 cm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S. | F7.1, 30 sec, ISO 1250
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G X VARIO 3.5-10.0 cm / F2.8 / POWER O.I.S. | F11, 1/250 sec, ISO 400
Panasonic LUMIX GH4 | အထင်ကြီးလောက်သည့် ဓာတ်ပုံများ၊ လက်ဖျားခါလောက်သည့် 4K ဗီဒီယိုများ
Bence Máté ပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် Panasonic LUMIX GH4 Shooting Impression
Daniel Berehulak ပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် Panasonic LUMIX GH4 Shooting Impression
Bryan Harvey ပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် Panasonic LUMIX GH4 Shooting Impression
Takehito Miyatake ပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် Panasonic LUMIX GH4 Shooting Impression
LUMIX G VARIO 0.7-1.4 cm / F4.0 ASPH.
LUMIX G VARIO 1.2-3.2 cm / F3.5-F5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G X VARIO 1.2-3.5 cm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.
LUMIX G X VARIO PZ 1.4-4.2 cm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
LUMIX G VARIO 1.4-4.2 cm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G VARIO 1.4-4.2 cm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G VARIO 1.4-4.5 cm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G VARIO 1.4-14.0 cm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
LUMIX G VARIO HD 1.4-14.0 cm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G X VARIO 3.5-10.0 cm / F2.8 / POWER O.I.S.
LUMIX G VARIO 4.5-15.0 cm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G X VARIO PZ 4.5-17.5 cm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
LUMIX G VARIO 4.5-20.0 cm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S.
LUMIX G VARIO 10.0-30.0 cm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S.
LUMIX G FISHEYE 0.8 cm / F3.5
LUMIX G 1.4 cm / F2.5 ASPH.
LUMIX G 2.0 cm / F1.7 Ⅱ ASPH.
LUMIX G 2.0 cm / F1.7 ASPH
LEICA DG SUMMILUX 2.5 cm / F1.4 ASPH.
LEICA DG NOCTICRON 4.25 cm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S.
LEICA DG MACRO-ELMARIT 4.5 cm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G 1.25 cm / F12
LEICA D VARIO-ELMARIT 1.4-5.0 cm / F2.8-3.5 ASPH. / MEGA O.I.S.
LEICA D VARIO-ELMAR 1.4-5.0 cm / F3.8-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LEICA D VARIO-ELMAR 1.4-15.0 cm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LEICA D SUMMILUX 2.5 cm / F1.4 ASPH.